Broadcast Pix သည် VOX Lite Voice-Automated Control ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ထုတ်လွှင့် Pix Vox Lite ကို Voice ကို-အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရေးမိတ်ဆက်
Billerica, မက်ဆာချူးဆက် - ထုတ်လွှင့် Pix¢ Lite ကို၎င်း၏ရေပန်းစားတစ်အသေးစားဗားရှင်း "ကိုယနေ့VOXâထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်¢" A Vox မည်သည့်Flintâ "¢, Graniteâ" ¢သို့မဟုတ်Micaâနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အသံ automated ထုတ်လုပ်မှု option ကို "ဘက်ပေါင်းစုံ¢ ထုတ်လုပ်မှု switcher။ ဒါဟာ Las Vegas မှာ, Nev အတွက်ဇွန်လ 2014-5737 ပြေးရသော InfoComm 18 (C20) မှာသရုပ်ပြလိမ့်မည်။
က 2011 မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကတည်းက Vox တစ်ဦးလူကြိုက်များ automated အမြင်အာရုံရေဒီယိုအဘို့အဖြေရှင်းချက်အဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်အစိုးရနှင့်ကော်ပိုရိတ်အစည်းအဝေးများဖြစ်လာခဲ့ပြီး အင်တာနက်နှင့် In-အိမ်ရာစီမံကိန်း။ ခေတ်မီဆန်းပြား software ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အလိုအလျှောက်ဗီဒီယိုနောက်ဆက်တွဲအသံဘဏ်ဍာအဘို့အကင်မရာများ switches ထားတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကို detect အဖြစ် Vox နှင့် Vox Lite ကို, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာများအတွက်အော်ပရေတာဘို့လိုအပ်ကြောင်းပပျောက်။
အသံလွှင့် Pix ရဲ့ built-in Fluentâ "¢ macro ၏တန်ခိုးကိုသုံးပြီး, Vox Lite ကိုလည်း add သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်, လိပ်ကလစ်ပ်နဲ့ animations တွေကိုဖယ်ရှား, ရှုပ်ထွေးသော PIP ရေးစပ်သီ execute နှင့်ဆွဲဆောင်အမြင်အာရုံအတှေ့အကွုံကိုဖန်တီးရန် Twitter ကဲ့သို့သောပြင်ပဒေတာသတင်းရင်းမြစ်များမှအချက်အလက်များထည့်သွင်းနိုင်ပါ။ အကွိမျမြားစှာဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောအသီးအသီးမိုက်ခရိုဖုန်းမှတာဝန်ပေးအပ်ရနိုင် - နှင့်ရွေးချယ်ရေးစံထူထောင်နိုင် - မတူညီရိုက်ချက်ရွေးချယ်ရေးနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖန်တီးရန်။ အခြေအနေများကင်မရာအပြောင်းအလဲများကိုထွက်လာပါတယ်ကနေချောင်းဆိုးသို့မဟုတ်တစကားလုံးမှတ်ချက်များကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ သည်အခြား features တွေကို manual အပေါ်မှထပ်နှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းဦးစားပေးနိုင်စွမ်းများပါဝင်သည်။
နှစ်ဦးစလုံး Vox မော်ဒယ်များတစ် 1RU breakout box ကိုဟာ့ဒ်ဝဲ interface ကိုပါရှိပါတယ်။ Vox ရှစ်မိုက်ခရိုဖုန်းသွင်းအားစု features များနှင့်အများအပြား Vox boxes တွေကိုမိုက်ခရိုဖုန်း 104 အထိကူညီပံ့ပိုးရန် cascaded နိုင်ပါသည်။ Vox Lite ကိုလေးမိုက်ခရိုဖုန်းထောက်ခံပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဗားရှင်း Panasonic ကဘို့ကင်မရာကိုထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲမြားပါဝငျနှင့် Sony က စက်ရုပ်ကင်မရာများ။
"ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များကိုအတူဘဏ်ဍာအဘို့, Vox Lite ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စျေးနှုန်းမှာအလိုအလျောက်အသံ-အတိုင်းလိုက်နာဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကမ်းလှမ်း," စတိဗ်အဲလစ်, အထွေထွေမန်နေဂျာ, အသံလွှင့် Pix ကဆိုသည်။ "ဒါဟာဒေသခံရေဒီယို station န်ထမ်းလိုအပ်ချက်များတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲအစည်းအဝေးကိုလွှမ်းခြုံတိုးတက်စေရန်ချင်သော Web ကိုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့မြို့များမှဗီဒီယိုစီးဆင်းမှုအဘို့ကြီးစွာသောလမ်းပါပဲ။ "
Vox Lite ကိုပု breakout သေတ္တာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲပါဝင်သော $ 3,500 ၏တစ်ဦး MSRP ရှိပါတယ်။ ကန့်သတ်အချိန်များအတွက်, Vox Lite ကိုသုံးထောကျပံ့ပေးသော Entry-level ကို Flint LE နှင့်အတူတစ်ဦးကို bundle အထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ရရှိနိုင် HDMI $ 9,995 သို့မဟုတ် Analog စသွင်းအားစု။ Vox Lite ကိုလည်း Flint LX (လေး SDI သို့မဟုတ်နှင့်အတူကို bundle နိုင်ပါသည် HDMI ဇွန်လ 12,495 မှတဆင့် $ 15,495 များအတွက် $ 30 သို့မဟုတ် Flint LS (မျိုးစုံကို configurations ခြောက်သွင်းအားစု) အတွက်သွင်းအားစု) ။ အားလုံးသုံး Flint မော်ဒယ်များနှစ်ခုတင်ပြချက်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီကွန်ပျူတာများကနေ Web-based content များအတွက်စံပြသောအပိုဆောင်းကွန်ယက်ကိုသွင်းအားစု, အဖြစ်ပြည်တွင်းရေးအသံရောနှောပါဝင်သည်။
အသံလွှင့် Pix အကြောင်း 2002 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, အသံလွှင့် Pix 110 နိုင်ငံများထက် ပို. အတွက်ဖောက်သည်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မှု Switcher အတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးမှအဆုံးသို့ပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းမှုစနစ်များအနေဖြင့် High-end တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာ, အသံလွှင့် Pix Switcher CG ပါဝင်သည်, Dual ကလစ်စတိုးဆိုင်များ, ဖိုင်-based ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောပြင်ပထိန်းချုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့်စိတ်ကြိုက် Multi-များအတွက်အကြီးစားစနစ်များကိုမှအကြိမ်ကြိမ် configurations အတွက်ရရှိနိုင် အမြင်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ထိန်းချုပ်မှု options များနှင့်အတူကို virtual အစုံ။ ထုတ်လွှင့် Pix လည်း ReVue လာမယ့်မျိုးဆက်နှေးပြကွက်စနစ်များကိုကမ်းလှမ်း, Real-time 3D ဂရပ်ဖစ်, Rapid CG ပြောင်းလဲနေသောဂရပ်ဖစ်ပလေးအောက်ဆော့ဖ်ဝဲ, နှင့် Vox အသံ automated တိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်ခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွန်အမင်းပေါင်းစည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်မှု Switcher ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းတစ်ခုချင်းစီ fX3D ။ ဖောက်သည်များဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်, ကော်ပိုရိတ်, ပညာရေး, အစိုးရ, ဘာသာရေး, အားကစား, streaming များနှင့်အမြင်အာရုံရေဒီယိုစတူဒီယိုများပါဝင်သည်။ မှာပိုမိုလေ့လာသင်ယူ www.broadcastpix.com.
ထုတ်လွှင့် Pix, Flint, ကျွမ်းကျင်, ကျောက်, Mica နှင့် Vox broadcast Pix, Inc မူပိုင်ခွင့်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ USA တွင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့် Pix အကြောင်းအရာ InfoComm ထုတ်လုပ်မှု switcher ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း စကားသံကိုအလိုအလျောက် Vox 2014-05-30
ယခင်: Viva + အင်ဒိုနီးရှားပရိသတ်များမှဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား 7000 ထုတ်လွှတ်ပါရန် DTH Service ကိုရွေးချယ်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe VS2014 Multi-Screen ကိုစနစ်
နောက်တစ်ခု: ဗီဒီယိုကိုကိရိယာအငှားဌာနများ Flypack ငှားရမ်းခြင်းယူနစ်အတွက် Calrec အသံစက်များ Installing အားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ရာထူးကိုပိုကောင်းစေ